ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မိတ္ထီလာအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် (အသံ)
မိတ္ထီလာအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် (အသံ)
မိတ္ထီလာအဓိကရုဏ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဗီဂျေနမ်ဘီယားနဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ဘာတွေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ် ဆိုတာကို ဦးဝင်းမြင့်က ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဘယ်သူ့မှ မယုံဘူး ။ Go and Die all of you ! ! !
တိုင်းပြည်ကလည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းမတွေ့ တော့ ဘူးလား ?
မင်းကိုနိုင် က လူကမွေးတော့လူအတွေးတွေးတာပေါ့မင်းတို့ကတော့
ဝန်ထမ်းလဲဖြစ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းလဲဖြစ်တဲ့ရဲတွေအဖို့ 
ရဲတပ်ဖွဲ့ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးဒေါ်စုပြောတာကအလွန်သဘာဝကျပါ